hay umatshini wepellet uyathengiswa,ukwenza i-hay pellets zokutya kunye ne ipetroli
Nazi, ngokweWikipedia, usikiwe kwaye womile ingca, alfalfa, iLegumes okanye ezinye izityalo ze-herbaceous kumabala amakhulu ajikelezileyo. Ihlala isetyenziswa njengokutya kwesilwanyana, ngakumbi iinkomo ezityetyisiweyo, amahashe, iibhokhwe, igusha, njl.
Inyaniso, hay inokwenziwa ipellets ngumatshini wepellet wokutya. Inokwenza hay ukuba ibe ziimpawu ezizodwa zemilo kunye nomxube wezinye izithako ukwenza ukuba izilwanyana zibe nesondlo ngokulinganayo.
Kutheni sisebenzisa umatshini we-hay pellet mill ukwenza i-pellets yamafutha?
Hay luhlobo lebhaybhile eqhelekileyo ebonakalayo kubomi bethu bemihla ngemihla, kwaye ayingabo bonke abantu abanengca abafuyi nokukhulisa iinkomo. Nje ngeziphumo, akufuneki zenze i-pellets zokutya. Nangona kunjalo, Uninzi lweentsapho zifuna ipetroli yokufudumeza amakhaya abo ebusika okanye ekuphekeni. Kule meko, i-hay pellets idlala indima ebalulekileyo ekunciphiseni iindleko zamafutha!
Umatshini we-hay pellet wenza njani i-hay pellets yokutya?
Okokuqala, qinisekisa ukuba ufumana izixhobo ezininzi. Emva koko i-grinder yokutya iyafuneka ukuze impahla eluhlaza ilungiselelwe kakuhle ipelleti (ubude bufutshane kune-10mm). Emva koko la masuntswana mancinci kufuneka atyunyuzwe abe ngumgubo usebenzisa isando sesando (ububanzi bungaphantsi kwe-3mm). Ekugqibeleni, kufuneka umatshini owomileyo ukugcina umswakama wengca ujikeleze 15%. Kwaye emva kokuba konke kwenziwe, Izinto ezibonakalayo ziyafumaneka kuphela kumenzi we-hay pellet. Yondla i-hay ungene umenzi wepellet, kwaye amandla aya kuxinzelelwa kwiipellethi ezixineneyo. Esi ayisosiphelo! Iipellets eziphuma kumenzi wepellet zishushu kakhulu (malunga 85 izidanga). Kuya kufuneka usebenzise umatshini opholileyo ukuze upholise i-pellets ukuze 35 izidanga. Emva kokuphola, iipellets kufuneka zipakishwe ngomatshini wokupakisha emva koko zinokugcinwa ixesha elide.
Kukho iipellets ze ipetroli
Iipellets ze-hay ezisetyenziselwa ipetroli zinezibonelelo ezithile:
I-hay pellet luhlobo lomthombo wokufudumeza oluhlaza kuba uvelisa 90% glue glue gases ezingaphezulu kwe-Fossil fuels ezifana namalahle, kwaye ngu 10 amaxesha aphantsi komda wokukhutshwa kwe-EPA.
Iipelley hay zinamandla okumangalisa aphezulu ekufakweni- kwimveliso ephezulu kakhulu 20:1, ngelixa iinkuni zinayo 10:1, kwaye i-biodiesel ine 5:1.
Iphawundi enye yeepellets zew hay ziya kuvelisa phantse 8,000 Ii-BTU, ephantse ilingane neenkuni ezilukhuni, kwaye nokuba kufutshane nobushushu obutsalwa ngamalahle ngamalahle. Ke ngoko luhlobo oluhle kakhulu lobushushu.
Yintoni egqithisile, hay kuyabiza ukufumana kwaye kuninzi kunamafutha ezinto zomhlaba.
Okwangoku, Ukwenza i-hay pellets ibe lishishini elithembisayo, kungekuphela ngenxa yeendleko eziphantsi zokufumana izinto ezingafunekiyo, kodwa kwakhona kuba ukutshisa i-hay pellets yokufudumeza ekhaya kungonga ngokumangalisayo isiqingatha seendleko.
ukwenza i-hay pellets zokutya
I-hay pellets ezenziwe ngumatshini wokucheba we-hay pellet ziqukethe izithako ezininzi ezifunekayo zesilwanyana kubandakanya umvundla kunye nemfuno yehashe ekukhuleni. Ubume be-Pellet bukwaphephe ukungalingani kwezilwanyana ezixineneyo. Ukwengeza, i ipellets kulula ukuzigcina, ukuze izilwanyana zitye i-pellets enesondlo unyaka wonke.